TINACloud के हो?
TINACloud मा के नयाँ छ?
सर्किट गैलरीमा प्रयास गर्नुहोस्
TINA + नि: शुल्क TINACloud पहुँच किन्नुहोस्
तनाव विश्लेषणले तनाव परिस्थितिहरूको लागि भागहरू जाँच गर्न सक्छ जस्तै अधिकतम शक्ति फैलावट र अधिकतम भोल्टेज र वर्तमान सीमा। तपाइँ यी मापदण्डहरू भागहरू वा सूचीमा गुण विन्डोमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रकारको विश्लेषण पनि स्मोक विश्लेषण भनिन्छ, किनकि अतिभारित भागहरू प्राय: धुआंलाई निस्कन्छ।
तपाईं विश्लेषण मा तनाव विश्लेषक सक्षम चेकबक्स सेट गरेर स्ट्र्रेस विश्लेषण चलाउन सक्नुहुन्छ विकल्प संवाद वा विश्लेषण मेनुमा।
विश्लेषण मेनुबाट डीसी वा ट्रान्जिट विश्लेषण हुँदा, घटकहरूको सूची अधिकतम सीमा भन्दा बढि प्यारामिटरहरूसँग देखा पर्नेछ।
यदि तपाइँ सूचीमा एक घटक क्लिक गर्नुहुन्छ भने योजनाबद्ध आरेखमा सम्बन्धित घटक चयन गरिनेछ र रातो बनाइनेछ।
अवयवहरूको अधिकतम मान घटक सम्पत्ति संवादमा वा घटक सूची प्यारामिटर संवादमा सेट गर्न सकिन्छ। दुबै घटकहरूमा डबल-क्लिक गरेर प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। विश्लेषण चलाउन अघि, सर्किटमा घटकहरूको अधिकतम मान जाँच गर्नुहोस् र सेट गर्नुहोस्।
यस सर्किटलाई TINACloud सँग अनलाइन चलाउन तस्वीरमा क्लिक गर्नुहोस्